Iyo yakazara Fraggle Rock yakatevedzana inowanikwa kubva Ndira 2022 | Ndinobva ku mac
Iyo yakazara Fraggle Rock yakatevedzana inowanikwa kubva muna Ndira 2022
Iyo Fraggle Rock ichave yakanamatira kuApple TV + zvachose. Dai dzanga dzatove nhau dzakanaka kuti sevhisi yekambani yeAmerica kutepfenyura zvemukati zvevaraidzo mukutenderera, "yakasaina" mavara eiyo. Dombo reDombo kuva nezvikamu zvitsva zvekutepfenyura hachisi chinhu kana tichienzanisa nenhau dzakatosimbiswa. Apple ichaburitsa nhepfenyuro yese kutanga muna Ndira 2022.
Apple TV + yakava imba yeFraggle Rock franchise. Iyo sevhisi yave kutotepfenyura iyo katalogi yese yezvikamu uye nhevedzano yezvikabudura kubva Rock On inogadzirwa panguva yekuvharirwa neCOVID. Nekudaro, nhau huru maererano nechibvumirano chakasainwa gore rapfuura kune vateveri veiyi animated nhepfenyuro yaive yekuti Apple yakanga yatuma kutorwa kwese kweiyo nhevedzano. Iyo kambani inogona pakupedzisira kuzivisa iyo nyowani nyowani, ine musoro Fraggle Rock: Kudzokera kuDombo, ichatanga kuratidzwa muna Ndira 21, 2022.
Zvichasiyana zvakanyanya nezvatakaona panguva yekuvharirwa pakutanga kwedenda. Panguva iyoyo firita yakasvibirira yakashandiswa, yakajairika yemafirimu uye akateedzana zvigadzirwa, asi panguva ino, hazvizove zvakadaro. Nekuti ikozvino bako rinofananidzira remavara ane animated richashandiswa. Kudzokera kudombo ichatora zvikamu 13 uye ichange iine vatambi vekare vakaita seGobo, Tsvuku, Wembley, Mokey, Boober padivi pezviso zvitsva.
Tiri kutarisira kutanga kwa2022, rinova gore rinovimbisa zvakawanda kune Apple nevashandisi vayo. Asi naFraggle, kutaura chokwadi ndakarohwa. Inhevedzano yandinoyeuka nomufaro kubvira ndichiri muduku. Kukwanisa kuzvidzokorora kurota uye kana iri paApple TV +, zvese zviri nani. Aya ndiwo mabatsiriro atinoita sevhisi kukura kuti chokwadi ndicho anochida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyo yakazara Fraggle Rock yakatevedzana inowanikwa kubva muna Ndira 2022
Iyo WhatsApp app iri kuswedera pedyo nekusvika kuMac
Safari Technology Preview inosvika vhezheni 135 ine 120 Hz rutsigiro rweMacBook Pros itsva